Tag: Varotra antsinjarany | Martech Zone
Tag: Varotra antsinjarany
Tamin'ny herinandro lasa aho dia niresaka tamin'i Rob Eroh, izay mitantana ny ekipa mpamokatra vokatra sy injeniera ao Milo. Milo dia motera fikarohana any an-toerana izay tafiditra mivantana amin'ny Point of Sale (POS) na ny Resource Resource (ERP) an'ny mpivarotra. Io dia ahafahan'ny Milo ho motera fikarohana marina indrindra raha ny amin'ny famaritana ireo entana amin'ny lisitra ao amin'ny faritra misy anao. Ny tanjon'i Milo dia ny hananana ny vokatra rehetra amin'ny talantalana rehetra amin'ny tantara rehetra amin'ny Internet…
Talata, Oktobra 9, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Andro fiasan'ny bilaogy - 15 Oktobra. Mahazoa fonosana vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana avy amin'ny GreenHome Manome fonosana vokatra iray tontolo iainana izahay raha azonao an-tsaina tsara ny isan'ireo bilaogera farany mandray anjara amin'ny Blog Action Day. Tokony hiditra amin'ny alàlan'ny 14 Oktobra ny Guesses raha ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Action Blog. Mianara bebe kokoa ary alao ny vinavinanao